Zanu-PF Yoramba Kuti VaMnangagwa naVaChiwenga Vave Makara Asionani
Emmerson Mnangagwa rnaVaConstantino Chiwenga
Mubato reZanu-PF munonzi mapindwa naPongwe zvekare uye panonzi pave nekunetsana kunotyisa dzimwe nguva pachiita mhirizhonga pakati pevari kutsigira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nevamwe vari kunzi vari kutsigira chikwata chinonzi chiri kudivi remumwe mutevedzeri wavo VaConstantino Chiwenga.
Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaTafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti VaMnangagwa naVaChiwenga vane hushamwaro hwakasimba uye nyaya yekunetsana iri kutaurwa iri kurukwa nevemapepanhau ana tinhai dzirwe.
VaMugwadi vati havo vari kurwira zvigaro zvepasi nguva isati yakwana vachatorerwa matanho.
Vamwe vakuru mubato iri vari kutiwo pane vamwe vakaita segurukota rezvematunhu VaJuly Moyo vari kunziwo vane chidokwa dokwa chekuda kutungamirawo uye vave kugadzira hwaro hwekuita izvi zvinonzi zvave kupa kuti bato rite zvinyekenyeke.
KuMasvingo kusungwa kwasachigaro wedunhu iri VaEzra Chadzamira nenyaya yekupomerwa huori pakugovera minda yedzimwe kuChiredzi yave kuiswawo zvematongerwo enyika vamwe vachiti zviri kuitwa nechkwata chaVaChiwenga avo vakamboyambira VaChadzamira muna Kubvumbi kuti vasiyane nenyaya yekuita zvehuori pakugovera minda. VaChadzamira vari kunzi vari kudivi raVaMnangagwa.
KuMashonaland West kune makwikwi akasimba pakati paAmai Mary Mliswa Chikoka naAmai Abia Mujere. Kudunhu reMidlands, nhengo dzebato iri dzaudza Studio 7 kuti pane kunetsana kunotyisa pakati pevari kutsigira sachigaro wedunhu iri VaDaniel Mckenzie Ncube nevari kutsigira vari kuda kutora chigaro ichi vari gurukota rezvevasori VaOwen Mudha Ncube avo vanonzi vari kudivi raVaMoyo.
KuMashonaland Central kune kukandirana makobvu nematete pakati pevari kutsira vakafanobata chigaro chasachigaro vari gurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe naVaLazerus Dokora.
KuMashonaland East kune kunetsanawo kwakasimba mubazi remadzimai reWomen’s League uye pachigaro chasachigaro pakati paVaKelvin Mutsvairo vari kutungamira vechidiki naVaMichael Madanha vakafanobata chigaro mushure mekushaya kwaVaJoel Biggie Matiza.
KuManicaland kune kunetsanawo kwakasimba pakati pevanonzi vari kuda chigaro chasachigaro webato vanosanganisira vakabata chigaro ichi pari zvino VaMike Madiro, VaAlbert Nyakuedzwa, VaEnoch Porusingazi uye VaJenfan Muswere.
Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato iri vaPatrick Chinamasa vakatendawo kuti mudunhu iri mune makakatanwa anotyisa nenyaya dzezvigaro.
Kunyangwe hazvo Studio 7 yataura nevakawanda vari kuda kukwikwidza vachitenda kuti vari kuda zvigaro, vaakawanda vatiwo havangabude pachena sezvo dare rePolitburo rakayambira kuti kutsvaga rutsigiro hakusati kwatanga nekudaro vari kuita izvi vacharangwa.
Matunhu aita mhirizhonga nenyaya yesarudzo anosanganisira Mashonaland Central neMashonaland West.
Vachipawo pfungwa dzavo, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaFarai Maguwu vanotungamira sangano reCentre for natural Resource Governance, VaFarai Maguwu vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato iri uye zvakatoenda kumazivandadzoka pakabviswa nechisimba vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.